Dureessichi beekamaa qorannoon booda abbaa ijoollee isaa sadanii hin ta'iin hafe - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Richaard Maason yeroo akka abbaa ijoollee isaa sadanii hin ta'iin itti himame maal akka itti dhaga'ame BBC'tti himetti
"Akka waan burruusa wa'iitiin na rukkutaniitti natti dhaga'ame."
Kan kana jedhu dureessa lammii Biriitish umuriin isaa ganna 54 ta'edha. Abbaan qabeenyaa beekamaa kun kaampaanii fuula MoneySupermarket.com jedhamu Biritish keessatti gatiiwwan/gabaa madaalu/dorgomsiisu namoota biroo waliin hundeessedha. Jecha armaan olii kanas kan dubbate waggaa lamaan dura yeroo dhukkuba akka namni dhalchuu hun dandeenye ykn nama maseensu cystic fibrosis jedhamu qabu doktoroonni itti himan ture.
Rifaatii/naasuu guddaa ture, haata'u malee naasuun isaa kun dhukkuba kana umurii isaa guutuu baataa turuu isaatiif miti.
Maason ijoollummaa isaa irraa jalqabee akka dhalchuu hin dandeenye dhukkuba akka qabu bare.
Rogeettii suuraa sarbaa isheetiif to'atamte
Kana jechuun ammoo abaa dhugaa ijoollee isaa sadanii haadha warraa isaa duraanii Katee waliin qaba jedhuu miti jechuudha.
Waggoota lamaan dura, Riichard Maason sababii rakkoo fayyaa yeroo ijoollummaa isaa isa mudate irraan kan ka'een dhala godhachuu akka hin dandeenye itti doktoroonni itti himanii turan. Achiin booda maaltu ta'e?
"Ani dhiironni cystic fibrosis qaban hunduu maseenadha waan ta'aniif carraa isaan abbaa dhugaa ta'anii dhalchan baayyisee xiqqaadha," jechuun BBC'tti hime dureessichi.
Goodayyaa suuraa Qorannoon qaccee sanyii (DNA) ijoollee sadanii taasifame akka agarsiisutti Maason abbaa ijoollee isaatii miti
"Ani jalqaba qorannichi sobahdan jedhe garuu dorktoroonni sirriitti mirkaneeffanneera jechuun akka ani haadha manaa koo duraatti dubbadhu barbaadan."
Maason kan amma qorannoo fayyaa gaggeessuun barbaachiseef inniifi haati manaa isaa isheen yeroo ammaa Emmaa jedhamtu ulfa argachuu waan dadhabaniif ture.
Yakka abbaa sobuu/abbaa dhoksuu
Achumaanis haadha warraa isaa ishee duraa Kateetiin gaafate. Ishee waliinis bara 2007 erga gaa'ela waggaa 20 waliin turanii booda walhiikan.
Ishee ammoo ijoollee lakkuu Ed fi Joel jedhaman umuriin isaanii waggaa 19 ta'an akkasumas Willem kan umurii ganna 23 kan isaa akka turan itti himte. Haata'u malee, kun qorannoo DNA tiin soba ta'ee argameera.
"Yeroo dheeraatiif waanti ta'e gurra kootti iyya (mataa keessa na naanna'a. Waanti ta'e tokko akka ana irratti hojjetamaa jirun shakka ture," jechuun ibse Maason.
Goodayyaa suuraa Abbaan murtii bokku uqabatee
"Eenyutu abbaa ta'uu danda'e jedheen yaaduun jalqabe. Waanan beeka garuu nan dhabe."
Richaard haadha warraa isaa duraanii kana yakka abbaa dhoksuu/waliin dha'uutiin mana murtiitti himatee ture. Ji'a Sadaasa darbees manni murtii miidhaa haati warraa isaa duraanii kun isa irraan geesseef Birrii miiliyoona 12 ykn Paawondii 320,000 ol akka kaffaltu itti murteesse. Dubartiin kun yeroo isa waliin wal hiikan maallaqa paawondii miliyoona 5 ykn Birrii miliyoona 190 ta'u irraa fudhatteetti.
Isheen (haati warraa isaa duraanii) abbaa ijoollee kanaa himuu hin barbaanne-maaliif, nuti hin beeknu.
Roojer Terreel, Abbaa seeraa Richaard Maason
Manni murtiis Kaateen akka abbaa ijoollee sadanii isa sirrii akka himuuf dirqama hin qabne ykn icciitiin qabachuuf mirga qabdu hayyameera.
"Isheen (haati warraa isaa duraanii) abbaa ijoollee kanaa himuu hin barbaanne-maaliif, nuti hin beeknu," jechuun Roojer Terreel Abbaa seeraa Richaard Maason dubbateera.
Goodayyaa suuraa Riichaard Maasoniifi haadha warraa isaa ishee ammaa
"Gara fuula duraa guyyaa tokko ijoolleen dhiiraa kun abbaa isaanii isa dhugaa baruu ni barbaadu- anis odeeffannoo sana isaaniif nan qaba. Hiriyyoota koo keessaa tokkodha ta'ee hin beeku, garuu namoota warra natti dhiyaatan keessaati," jedheen amana jedha Maason.
"Nama natti dhiyoo jiru ta'ee kan yeroo ani ijoollee dhiiraa kana eegu na argau, yeroo ani kubbaa miilaa ykn raagibii taphadhu yookaan ammoo maatii barataatiif jecha alkan mana barumsaa jiru quba na qabudha," jechuun BBC'tti hime.
"Yeroo jireenya fokkisaa dhoakataa akkasii jirenya kee keessati qabaattu gara malee si miidha; namni kamiyyu ammoo odeeffannoo sana baruu barbaada," jechuun itti dabalee ibse.
Abbaan qabeenyaa kun nama abbaa dhugaa ijoollee sadanii sana natti himeef Birrii 243,000 ykn paawondii 6,400 akka badhaasu waadaa galeeraaf.
Nama natti dhiyoo jiru ta'ee kan yeroo ani ijoollee dhiiraa kana eegu na argau, yeroo ani kubbaa miilaa ykn raagibii taphadhu yookaan ammoo maatii barataatiif jecha alkan mana barumsaa jiru quba na qabudha.
Riichaard Maason, Abbaa qabeenyaa
Akkaa gaazexaan Biriitish The Daily Mail gabaasetti Maason abbaan ijoollee sadan kan dhalatan nama haadha warraa isaa duraanii kan taate Katee waliin darbee darbee baroota 1990 keessa walitti dhufeenya qabaataa tureefi nama baankii Barclays keessa ishee waliin hojjetu ta'uu mala jedhee amana.
BBC'n Katee dubbisuudhaaf yaalus deebii kennuu hin barbaanne.
Dhimmi mana murtichaa Maasoniif dhukkubbii biraa uumeera,, ijoolleen isaa lamaan isa qunnamuu dhaabaniiru.
"Maal akka isaan Feesbuukii irratti hojjetan argeera, sun hedduu laphee koo na cabse," jedhuun Daily Mail tti hime Maason.
Yeroo ammaa kana warra lakkuu keessaa tokko kan ta'e Ed qofatu Maasoniin dubbisaa jira.
Maal akka isaan Feesbuukii irratti hojjetan argeera, sun hedduu laphee koo na cabse. Inni hangafti dhiyeenya kana eebbifame. Anaan garuu hin hafeerrellee.
Joel garuu, warra lakkuu keessaa inni tokko callisuu isaa cabsuun Daily Mail tti akka himetti amala Maason torban darbe dubbateera.
"Inni nama baayyee namatti fayyadamuufi nama miidhudha, inni nama sirrii waliin ta'uun barbaachisu miti. Kana ani yeroon waggaa 15 turen hubachuu jalqabe," jedha.
Haata'u malee, gurbaan kun abbaan isaa inni sirriin eenyu akka ta'e baraa akka barbaadu hgin dubbanne.
"Richaard abbaa kooti ani isa sirrii barbaachi hin dhaqu. Ani nuti akka lafarra jirruuttillee kan beeku natti hin fakkaatu."
Viidiyoo Abbummaan isa abbaa ta'eefis isa abbaa qabuufis maali?